Razana (finoana malagasy) - Wikipedia
Ny razana, araka ny finoan-drazana malagasy, dia ireo olona efa maty nefa heverina ho hery mpanao soa (amin' ny alalàn' ny fanahiny) eo amin' ny fiainan' ny velona, noho izy ireo nandovana zavatra maro na inoana fa manam-pifandraisana akaiky kokoa amin' ny Zanahary amin' ny maha fanahy azy. Ny Malagasy mandala ny fivavahan-drazana dia mihevitra fa ny fanahin' ny razana dia mety manjary angatra raha tsinontsinoavina na atao ratsy. Heverina fa manangatra eo amin' ny fasana nandevenana azy sy mitondra aretina sy loza amin' izay nanao ratsy azy ny angatra. Misy ny mino fa ny fombafomba sasany, toy ny famadihana, izay amokarana sy amonosan-damba vaovao ary andevenana indray ny vatan' ny maty isaky ny dimy hatramin' ny folo taona, dia misakana ny fanjariana ho angatra na kinaoly noho ny fikambanan' ny lamba amin' ny hasina, izay hery mahavelona tsy hita maso sy masina. Miovaova arakaraka ny faritra eto Madagasikara ny finoana momba ny hery sy ny asan' ny razana. Ny fanambaràna ataon' ny razana na ny asany no matetika niandohan' ny fady izay mandrafitra ny ampahany amin' ny fiainam-piarahamonina malagasy nentim-paharazana.
Hita eo amin' ny fomba fiteny sy fanao samihafa ny lanjan' ny razana eo anatrehan' ny Malagasy. Anisan' izany ny fanomezana lanja ny tanindrazana (na tanin-drazana), ny tenin-drazana, ny fomban-drazana, ny fadin-drazana, ny vakodrazana, ny fahitana ny teny hoe razana ao amin' ny anarana malagasy maro, sy ny maro hafa koa. Ny fanaovan-javatra amin' ny anaran' ny taranaka koa dia ahitana taratra ny fanomezana lanja ny razana.
1 Ny fanatrehan' ny razana sy ny fomba amantarana ny sitrapony
1.1 Ny fisehoan' ny razana sy ny fanatrehany
1.1.1 Ny fisehoan' ny razana amin' ny alalan' ny nofy
1.1.2 Ny tsindrimandry
1.1.3 Ny fanatrehan' ny razana amin' ny alalan' ny tromba
1.1.4 Ny fisehoan' ny angatra
1.1.5 Ny fomba hafa anakarana ny sitrapony
1.1.6 Ny sikidy sy ny fanandroana
1.1.7 Ny fambara
2 Ny fanajana ny razana sy ny fivavahana aminy
2.1 Ny razana ivavahana na tompoina
2.1.1 Fivavahana amin' ny razan' ny fianakaviana
2.1.2 Fivavahana amin' ny razan' ny mpanjaka
2.1.3 Fanompoana razam-bahiny
2.2 Ireo zavatra aorina anehoam-panajana ny razana
2.2.1 Ny fasana
2.2.2 Ny hazomanga
2.2.3 Ny aloalo
2.2.4 Ny tsangambato
2.3 Ireo fomba anehoam-panajana ny razana
2.3.1 Ny fanajana ny fady
2.3.2 Ny fanaovana famadihana
2.3.3 Ny zorofirarazana
2.4 Ny fomba isehoan' ny fivavahana amin' ny razana
2.4.1 Ny fanaovana sorona
2.4.2 Ny fankalazana ny fitampoha
2.4.3 Ny fiheverana ny razana ho afaka ho lasa zanahary na andriamanitra
3 Ireo fomba fiteny maneho lanjan' ny razana eo amin' ny Malagasy
3.1 Ny tanindrazana
3.2 Ny tenin-drazana
3.3 Ny fadin-drazana
3.4 Ny fomban-drazana
3.5 Ny vakodrazana
3.6 Ny fidiran' ny teny hoe razana na raza ao amin' ny anaran' ny Malagasy
Ny fanatrehan' ny razana sy ny fomba amantarana ny sitraponyHanova
Rehefa te hiresaka amin' ny velona ny razana dia matetika miseho amin' ny nofy, ka amin' izany no ilazany ny hafatra tsy voalazany fahavelony na anamafisany izany, amin' izany koa no anambaràny ny zavatra tiany hatao aminy na tsy tiany hatao aminy, amin' izany no ilazany ny tokony hatao amin' ny fananana na taranaka navelany. Matetika dia ny ombiasa no misahana izany ny fanambaràna ny hevitry ny nofy.
Ny fomba hafa anakarana ny sitraponyHanova
Ny sikidy sy ny fanandroanaHanova
Ny sikidy dia fikirakirana voan-javatra (voam-pany, vaoan-tsaramaso, voan-kily, sns) na tapa-javatra maro (ahitra, rantsan-kazo, sns) na fasika izay anisan' ny manampy amin' ny fahalalana ny sitrapon' ny razana. Amin' ny alalan' ny "famakiana ny sora-tsikidy" aton' ny mpisikidy no ahafantarana izany, izany hoe ny fanakarana ny hevitra ambaran' ny endrika voaforona amin' ny alalan' ny fandaharana ny voan-tsikidy. Ny razana rahateo koa dia anisan' ny tokavin' ny mpisikidy aloha sy mandritra ny fandaharana ny sikidy. Ny tsanganan-tsikidy atao hoe Asorotany na Asorotà no manondro ny razana. Amin' ny fanandroana malagasy dia ny zoro Asorotany no omena ny razan' olon-tsotra fa ny Alahamady no an' ny razan' ny mpanjaka.
Ny fanajana ny razana sy ny fivavahana aminyHanova
Ny fivavahana amin' ny razana dia fivavahana amin' ny fanahin' ny maty. Aseho amin' ny alalan' ny fanajana ny fady koa ny fivavahana amin' ny razana. Ny fanehoam-panajana ny razana dia mahatonga ny razana hitahy ny velona.
Ny razana ivavahana na tompoinaHanova
Fivavahana amin' ny razan' ny fianakavianaHanova
Ny Malagasy mandala ny fivavahan-drazana dia mivavavaka na manompo ny razana ao amin' ny fianakaviana misy azy, indrindra ny razana nipoiran' io fianakaviana io.
Fivavahana amin' ny razan' ny mpanjakaHanova
Ankoatra ny fivavahana amin' ny razan' ny tena dia ivavahan' ny vahoaka ny razan' ny mpanjaka, ka manamafy ny sata maha mpanjaka ny mpanjaka sy ny taranany izany. Ny fivavahana amin' ny razan' ny mpanjaka dia tanterahin' ny vahoakan' ny fanjakana isam-paritra tapahin' io mpanjaka io. Na dia amin' izao andro efa tsy mampisy mpanjaka manam-pahefana ara-pôlitika izao dia mbola maro ireo faritra manompo ny razan' ireo sokajin' olona atao hoe andriana na mpanjaka na ampanjaka izany hoe taranaky ny mpanjaka taloha.
Ity fanompoana razam-bahiny ity dia fahita amin' ny fanompoana tromba, ka ny fanahy tromba dia mety fanahin' olona (matetika mpanjaka taloha) tsy iray faritra na fianakaviana amin' ny tena, ary mety ho fanahin' olona tsy malagasy akory aza (frantsay, anglisy, pôrtogey, sns), izay tsy mpajaka fa mety tantsambo na olona manana ny lazany manokana. Anisan' ny noheverin' ny Malagasy ho fanompoana razam-bazaha ny fivavahana kristiana izay manao an' i Jesoa na Jesosy ho Andriamanitra.
Ireo zavatra aorina anehoam-panajana ny razanaHanova
Ireo fomba anehoam-panajana ny razanaHanova
Ny famadihana dia fomba amoahana ny taolan' ny havana maty avy ao am-pasana mba hamonosan-damba azy sy hampidirana azy am-pasana indray. Izany fanao izany dia mitazona sy mampitombo ny fifandraisan' ny velona sy ny razana. Ny any amin' ny faritra maro eto Madagasikara, indrindra ny any afovoan-tany, dia famadihana. Ahatsiarovana ireo razana sy ivorian' ny fianakaviana sy ny mpiara-monina ny famadihana ary anaovana lanonana.
Ny zoro eo avaratra-atsinanana eo amin' ny trano na ny tanàna, atao hoe zoron' Alahamady, no zoro atokana ho an' ny razana, atao hoe zorofirarazana na zoro firarazana. Zoro saro-pady sy masina indrindra ny Alahamady satria eo no itodihana raha mivavaka amin' Andriananahary sy ny razana ary eo no apetraka ireo zava-masina rehetra.
Ny fomba isehoan' ny fivavahana amin' ny razanaHanova
Ny fiheverana ny razana ho afaka ho lasa zanahary na andriamanitraHanova
Anisan' ireo zavatra mety ho lasa zanahary na andriamanitra, na antsoina hoe zanahary na andriamanitra, ny razana.
Ireo fomba fiteny maneho lanjan' ny razana eo amin' ny MalagasyHanova
Hita eo amin' ny fomba fiteny sy fanao samihafa ny lanjan' ny razana eo anatrehan' ny Malagasy, na mpandala na tsy mpandala ny finoan-drazana izy.
Anisan' ny zavatra sarotra foanana eo amin' ny fisainan' ny Malagasy ny fanajana ny fadin-drazana, izay endrika iray anehoana ny fanajana ny hafatry ny razana. Ka na ny Kristiana malagasy na ny Miozolmana malagasy dia sahiran-tsaina amin' ny fiheverana ny tsy hanajana izany fady izany.
Ny fidiran' ny teny hoe razana na raza ao amin' ny anaran' ny MalagasyHanova
Maro ny anarana malagasy ahitana ny teny hoe razana na raza. Izany dia maneho ny fahatsiarovana na ny fanajana ny razana nipoirana. Misy ny antokom-pivavahana sarotiny ka manaisotra ny anarana malagasy ahitana taratra ny finoan-drazana malagasy, raha mitondra izany anarana izany ny mpino ao aminy, ny anaram-bitana na anarana misy ifandraisana amin' ny vintana no tena voan' izany, izay soloana anarana hafa, anarana kristiana na anaran' olona ao amin' ny Baiboly, raha fivavahana kristiana no misy azy. Ny anarana ahitana ny hoe razana na raza anefa tsy dia voakasik' izany loatra.
↑ 1,0 et 1,1 Littleton, C. Scott (2005). Gods, goddesses, and mythology. Marshall Cavendish. p. 74. ISBN 9780761475590. Notsidihina 19/06/2010.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Razana_(finoana_malagasy)&oldid=1042824"
Dernière modification le 9 Janoary 2022, à 11:29
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2022 amin'ny 11:29 ity pejy ity.